Henna Mehndi tattoo designs pfungwa yebridal - Tattoos Art Ideas
Henna Mehndi tattoo designs pfungwa yebridal
sonitattoo December 17, 2016
1. The Raja Rani Pattern
Iyi muenzaniso inowanzoshandiswa se # bridal mehendi yakawanda yemichato. Izvo zvigadzirwa zvinoratidza mufananidzo we raja uye rani zvinomiririra umambo hweMughal nguva. Mifananidzo yakasiyana-siyana inogadzirwa kuzotarisa zviso zve mambo uye mambokadzi
Kusiyana nemitemo ye mehendi iyi iyi yakasiyana zvakasiyana. Inowanzobatanidza vaviri valentine vakaroorana pamatende maviri akasiyana saRoomo Juliet.
3. The Rajasthani Pattern
Mhedziso yakakwana mehendi kana iwe uri kuenda kumuchato wamambo. Izvo zvigadzirwa zvingavewo zvakakwana zvechikwata kana chiri chikwata chechichato chemambo.
4. Mukadzi Groom motif
Izvi zvakasarudzwa zvikuru pakati pePunjabis. Vanowanzosarudza ichi chigadziro kune vakaroorana vavo. Icho chimiro chinomiririra rudo uye hupenyu hwehupenyu hwemweya miviri.
Iyo yakanakisisa yakagadzirwa inoenda kune imwe nguva iyo peacock motif. Izvi zvakagadzirwa nguva dzose kubva pakufamba kubvira pamazera. Icho chimiro chakakwana chinomirira chikadzi.
Iyo yakagadzirwa pamusoro apa inonzi combo yemaruva mabhakoni muenzaniso. Rima rakasvibiswa pamwe chete nekugadzirwa kwakakosha kunoita kuti rakagadzirwa zvachose rakanaka. Iyo inogonawo kushandiswa kumudzimai mehendi.
Kuchengetedza kwenguva yakareba yakagadzirirwa yeve-ingava-bhodzi asi ichiri kushamisa. Kunze kwezvo, chimiro chakakurumbira pakati pevachato kuti vave. Inyanzvi yakasarudzwa yakasarudzwa kune vanozivikanwa. Dharirai izvi kana muchato wenyu wava pedyo.
Ichi chisinganzwisisiki chakagadzirisa zvakagadzirirwa chakakwana kumukadzi wechiGujarati kuva. Iyo henna inosanganisira #idhesi yekubatanidza peacock pamakumbo uye dhaniya dhaniya pamaoko ose. Chiratidziro chakakwana chetsika uye tsika.
Izvo zvinoratidzira zvinoratidza kusanganisa kwekugadzirisa zvinhu zvinopa kutarisa kwemambo kune mehendi. Nherera kumusoro inowedzera kubata kumambo.
10. Divine Form
Mifananidzo iri pakati pechindwe inomiririra Radha-Krishna, iyo yakanakisisa yehuMwari iyo inoteverwa nechimiro chechikadzi chinomirira chikadzi uye peacock pakupedzisira.
11. Zvigadzirwa zveChechi
Imwe yekare kare yakasikwa yakagadzirwa nemafashoni kwemakore. Iyo inoumbwa nemapurisa epaisley, mabheji, maruva uye maruva.
12. Divine Love Motifs
A perfect #mehendi kuratidzira rudo kune vadikanwa nekunyora zita nekuchena kworudo nemifananidzo Ganesh pakati pechindwe.
13. Pailsey Peacock Motif
Chimiro chakakwana chemuchato wekudova kumadokero kana kuti mari yakawanda yeIndia yakagara pamahombekombe. Ndiyo mhedzisiro yakazara yemazuva ano uye kugunzva kwepaisisiti yepisisley uye kushandiswa kwepikoko kunopa iyo kuonekwa kwechitsika.
Cluttered design ye mehendi yakakosha nokuda kwechokwadi chaiyo yeIndia muchato.
15. Mukadzi-groom Peacock motifs
Mwenga muroori pamwe chete neyanzvi peacock inoita kuti zvive zvakanakisisa kune mhedziso yemutambo wemuIndia yemutambo.
Kubatanidza kusina chakanaka kwemifananidzo indo-western !! Ive maruva ose pamusoro pemakumbo uye mazamu ari pamuchindwe anoita kuti zvive zvakakwana kumuchato we-indo-western.
Iyo yakagadzirwa nehanna inonyanya kuratidza mapikoko maviri pamaoko anenge akapoteredzwa nemakumbo ane paisley touch.
Iyo yakagadzirwa zvikuru inoratidzira maruva emhando dzakasiyana-siyana nekidiki kemusasa pamichindwe uye paruoko kune zvigunwe.
Kubva pamuchindwe kusvikira kune imwe nzvimbo chikamu peacock shongedzero yakanyanya kuratidzwa ne tinge yemaitiro akaoma.
Mifananidzo ye bracket ndiyo inonyarara inodikanwa yevose mehendi vanoda. Izvo zvakagadzirirwa zvachose zvinonyanya kuiswa pane bhandi pattern inoshanda.
Perfect traditional mehendi !! Iyo henna inosanganiswa nemarwadzo ose anobva kumagadziro emango, mwenga nemukomba kune peacocks uye ne-filings pamusoro pemumwe wese.
22. Nyeredzi yeNyebvu
Ndiyo inonyanya kufarira mehendi maitiro evanenge madzimai ose. Izvo zvakagadzirirwa ndeye mutsara we swirl uye mazamu emakwenzi anonyatsogadzirwa pamaoko nemakumbo.
23. The Symmetrical Pattern
Muzambiringa unogadzira uye maruva anobudirira basa ibasa rakanaka rekushandurwa kwekupedzisira mehendi.
24. Muenzaniso wePaisley
The pailey prints ndeye tsika dzakasiyana-siyana. Iyo mifananidzo inogona kuitwa nenzira dzakasiyana-siyana dzakadai semango mango uye dzimwe sirly uye dzinokonzera maitiro.
rip tattoosshamwari yakanakisisa tattooschifuva tattooscherry blossom tattooFeather Tattoooctopus tattoohanzvadzi tattoosmaoko tattoostribal tattooscute tattooselephant tattootattoo ideaskoi fish tattooHeart Tattooscross tattoosGeometric Tattooseagle tattooscat tattoosshumba tattooarm tattoosscorpion tattoodiamond tattootattoo yezisomimhanzi tattooszodiac zviratidzo zviratidzoinfinity tattootattoos kuvanhubutterfly tattoosneck tattooscompass tattootattoos for girlskorona tattoosbirds tattooscouple tattoosarrow tattoolotus flower tattoorudo tattoosAnkle TattoosAnchor tattoosflower tattooswatercolor tattooangel tattoosrose tattoosback tattoosmwedzi tattoossleeve tattoosmehndi designfoot tattooshenna tattoozuva tattoos